गाेर्खालीकाे "पेट" हुन्छ, तर "देश" हुदैन - Naya Online
बिहिबार, असार १, २०७४ (June 15th, 2017 at 3:28am ) ब्लग
यदि गाेर्खालीहरूकाे बहादुरीकाे सम्मान हुन्थ्याे भने त्याे जाबाे कत्राे नै माग थियाे र । स्वतन्त्र छुट्टै राज्यकाे माग थिएन, आखिर उही दिल्लीकै निर्देशन मान्नुपर्ने स्वयत्त राज्यकाे माग नै त थियाे ।
“हामी गाेर्खाली हाैं , हामी वीर छाै” भनेर कुन्ताकाे थेप्चाे र ठेंडाे नाक त्यस माथि फुर्किएर अरू फुल्याउँछाैं । तर हाम्राे प्रतिष्ठकाे कुनै उचाइ नै छैन ।
बरू यहुदी जातिकाे अस्तित्वकाे लागि विश्वले सम्मान दिए । सम्मानमात्र हाेइन, ईजरायल देश नै स्थापना गरिदिए । किनकि यहुदीले बुद्धि र विवेकले प्रभावित बनाएकाे थियाे र यहुदीहरूले आफ्नाे राजनैतिक अग्रज थियाेडर हर्जलले भनेका मानेका थिए ।
गाेर्खालीकाे पेटमात्र हुन्छ देश हुदैन भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । यी जातिहरूलाई भारतले आफ्नाे लागि बन्दुक बाेकाएर जागिर दिएकाे छ । गाेर्खालीलाई पैसा दियाे भने जहाँ गएर पनि लडिदिन्छन् भन्ने साेच भारतलाई छ । महिनाकाे २ लाख तलब दियाे भने ISI काे लडाकुमा पनि भर्ना हुन जान्छन् भन्ने दिल्लीलाई थाहा छ । यस्ताे छाप दिल्लीमा रहे पछि दार्जिलिङकाे बिमल गुरूङलाई माेदीले टेर्छ ?
दार्जिलिङका गाेर्खेलाई दिल्लीले नेपालका राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, गुरूङ, नेवारकाे रूपमा लिएकाे छ । यी जातिहरूकाे हालत दिल्लीलाई राम्ररी थाहा छ । संसारमा बहादुर जाति शासक हुन्छ तर नेपालमा बहादुर जाति गुलाम छन् भन्ने कुरा दिल्लीलाई थाहा छ । भारतीय गाेर्खेकाे नेपालका उद्गम वंशहरू नै नालायक भए पछि दिल्लीले पत्याउँछ त ? यदि नेपालकाे सिहदरबारमा गाेर्खालीहरू भनिएकाहरूकाे दबदबा हुन्थ्याे भने दिल्लीले उनकाे गाेर्खेलाई कदर गर्थ्याे ।
याे गार्खाली शब्दकाे ब्रान्डमा नै इज्जत छैन । आखिर त्याे सिक्किमका मुख्यमन्त्री राई नै हुन् । उनले मज्जाले राज गरिरहेका छन् । उ गाेर्खाली हुन खाेज्याे भने चिप्लिन्छ ।
हामी गाेर्खाली मात्रै हाै अझै नेपाली हुन सकेका नै छैनाै । विदेशीले हामीलाई नेपाली (सार्वभाैमसत्ता सम्पन्न नागरिक) भनेर मान्यता नै दिएका छैन, गाेर्खाली भन्छन् । गाेर्खाली हुनु र नेपाली हुनु फरक हाे भन्ने चेत हामीमा खुलेकै छैन ।
जब सम्म नेपालका गाेर्खाली नेपाली हुन सक्दैनन् तब सम्म भारतका गाेर्खेकाे मुल्यांकन हुन्न ।
यहाँ नेपालमा आफू नेपाली बन्न सकेका छैनन्, आफ्नाे अस्तित्वकाे ठेगाना किटान गर्न सकेका छैन् तर उता भारतीय गाेर्खेकाे मुद्दालाई भाईरल बनाउँछाैं ।पहिले गाेरखालीलाई नेपाली बनाउने राजनीतिक पार्टीकाे चुनाव चिन्ह “घर” लाई चाहि भाईरल बनाएर मुक्ति र माेक्ष प्राप्त गर्नु नि ।
अनुहार र वंश मिलेर हुन्न , राष्ट्रियता मिल्नु पर्छ । सिक्कमका पवन चामलिङ र नेपालका बलदीप चामलिङ रगत र वंशले मिल्छ । तर राष्ट्रियताले मिल्दैन । उ भारतकाे हाे, म नेपालकाे हाे । ईलाम पारिकाे सिक्किमकाे डाडाे मेराे हाे भनेर दावी गर्न जाँदा बलदीपलाई पवनले गाेली ठाेक्छ । याे मेराे वंश र रगत हाे भन्दैनन ।
निनाम लोवात्ती कुरो विसं २०५८ साल कात्तिक–मंसिर महिनाको हो । त्यो बेला म पर्यटन...
मातृशोकको घडीमा “सम्झनाका छालहरू” बाट सम्पादित केही अंश
उदय पूर्वेली चोङ्बाङक्याक मेरी आमा हरतरहले आफ्नो एक्लो छोरोले मदिरा सेवन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने...
सामाजिक सङ्घर्ष र पहिचानको आवाज आमाको तासफोटो
शनिबार, फाल्गुन २१, २०७८
मातृहाङ नेम्बाङ प्रसँग सन् २०१६ को हो । विश्व नेपाली साहित्य समाज दक्षिण कोरियाले...
पर्यटन: बराहक्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना र चुनौति
लक्ष्मण कटुवाल बराहक्षेत्र नेपालको सुनसरी जिल्लामा अवस्थित ऐतिहासिक तीर्थस्थल हो । सप्तकोशी र कोकाहा...